Zavers: Nkesa kuki dijitalụ sitere na Google | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 20, 2014 Tọzdee, Febụwarị 20, 2014 Douglas Karr
Google na-agbatị aka ya na nkesa dijitalụ na-ekesa ya Ndi Zavers. Zavers na-enyere ndị na-ere ahịa aka inweta Kupọns kwesịrị ekwesị na ndị na-azụ ahịa ziri ezi, gbasaa mmemme ụgwọ ọrụ, ma soro mgbapụta na ezigbo oge. Ndị na-azụ ahịa na-achọta ego maka ndị nrụpụta na ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa kachasị amasị ha ma gbakwunye Kupọns dijitalụ na kaadị ha n'ịntanetị. A na-ewepu ego na-akpaghị aka na ndenye ọpụpụ mgbe ndị na-azụ ahịa swipe kaadị ụgwọ ọrụ ha ma ọ bụ pịnye na nọmba ekwentị ha - enweghị nyocha ma ọ bụ nhazi nke Kupọns ahụ dị mkpa.
Uru nke Zavers Digital Coupon Distribution
Ụgwọ Ọrụ - Zavers nke Google na - enye gị ohere ịgbatị mmemme agbamume dị ugbu a ma kwụọ ụgwọ ịzụ ahịa na sistemụ dijitalụ. Nwekwara ike ịnye ndị ahịa ego maka ndị ahịa na-enweghị mkpa ịmepụta mmemme agbamume.
Meewanye azụmahịa azụmahịa na ndekọ - Kupọns na-etinye aka na ịzụta na-enweghị ntụpọ na-enweghị mkpa igosi na i scanomi akwụkwọ ma ọ bụ dijitalụ Kupọns. Mgbapụta na-eme n'oge, na-ebelata esemokwu na oge ndenye ọpụpụ. Ndị ahịa na-eji Google Wallet nwekwara ike ịgbapụta Kupọns ha ozugbo site na ịpị ekwentị ha na ndenye ọpụpụ.
Mee ka ndenye ego dị mfe - Zavers site na Google na-eme ka nhazi dị mfe, ngwa ngwa ma gbochie wayo.
Dịkwuo nkata - Nweta uzo buru ibu nke Google nke ndi na emeputa ihe nlere iji nyere gi aka ime ka nkata buru ibu na uzo ibanye na uzo ohuru.
Nkesa ebumnuche - ike nke ndi ahia inye gi ohere inyefee ndi ahia ndi ahia. Jiri advavụ mgbasa ozi nke Google na gbatịa iru nke coupon ezubere iche gafee web Ngosipụta Ngosipụta Google.
Versdị ịkwụ ụgwọ-kwa-mgbapụta Zavers na-eme ka o doo anya na enweghị ụgwọ maka nkesa, mmetụta, ma ọ bụ ịchekwa - naanị ịkwụ ụgwọ mgbe onye ahịa gbapụtara akwụkwọ ikike maka ngwaahịa a kwalitere. Ihe ngosi Google gosiputara na netwọkụ bụ ụdị mgbasa ozi kachasị ukwuu nke ụdị ya, na-eru ihe karịrị iteghete n’ime mmadụ iri na US
Tags: couponcoupon mgbasa ozinkesa couponmgbapụta mgbapụtaKupọns dijitalụgoogle +Kupọns ekwentịzavers
Serchen: Ugwu igwe ojii nke Cloud na Nyocha Site